URob Legato Usebenzisa uyilo lweBlackmagic UkuYila iMveliso eyiyo "INkosi yeNgonyama" -I-NAB Veza iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Umsasazi wase-NAB Show-NAB BONISA u-LIVE
ikhaya » iindaba » URob Legato Usebenzisa uyilo lweBlackmagic ukudala imveliso eyiVenkile ye "The Lion King"
URob Legato Usebenzisa uyilo lweBlackmagic ukudala imveliso eyiVenkile ye "The Lion King"
IFremont, eCalifornia-Lwesibini, ngoSeptemba 24, 2019 - Blackmagic Design kubhengezwe namhlanje ukuba umphathi wempembelelo zokubonakalayo uRob Legato usebenzise iintlobo ezininzi Blackmagic Design iimveliso ukwenza imeko yemveliso ebonakalayo ye-Disney's "The Lion King." Ifilimu, eyayikhokelwa nguJon Favreau kwaye inika amazwi kaDonald Glover kunye noBeonconcue Knowles-Carter, ifumene phantse i-1.5 yezigidigidi kwilizwe lonke ukusukela ngoJulayi 19, 2019 ukuvula.
Itekhnoloji efumanekayo namhlanje, ukuvelisa ifilimu ye-3D yefilimu ayifanelanga ukuba yinkqubo yokulinda uvavanyo loopopayi kwiqela leopopayi. Umphathi wempembelelo ezibonakalayo uRob Legato, a Award Academy Award ophumeleleyo kwiifilimu ezinje ngo "Hugo" kunye ne "Jungle Book", wayefuna ukuthatha itekhnoloji ukuya kwinqanaba elitsha, kwaye enze indawo apho abenzi beefilimu zemveli banokusebenza khona kwindawo yedijithali, besebenzisa izixhobo eziqhelekileyo abazifumanayo kwiseti yentshukumo ebukhoma. “Injongo yayingekokuvelisa umpu ngamnye kwikhompyuter,” utshilo uLegato, “kodwa kukufota imeko yedijithali ngokungathi iseti yokwenyani.”
Ukubuyisa abalinganiswa abathandekayo kwiscreen esikhulu ngendlela entsha, ibali liya kwi-savanna yase-Afrika apho ikamva elizayo kufuneka liyoyise ukungcatsha kunye nentlekele yokuthatha indawo yakhe efanelekileyo kwi-Pride Rock. Njengomdlalo bhanyabhanya wase1994 wentshukumo ovela kwi-Disney animation, eyayilixesha layo into emangalisayo kwi-2D oopopayi, uguqulelo lwe-2019 lwatyhala ubuchule bethekhinoloji yanamhlanje kwakhona, ngeli xesha usebenzisa imizobo esekhompyuter ye-imeyile ukwenza indlela engazange yabonwa ngaphambili. Kodwa ngaphaya kokujongwa kokugqibela, iprojekthi yamkele itekhnoloji entsha kulo lonke, kubandakanya ngexesha lokuvelisa, isebenzisa imeko yokusingqongileyo ebonakalayo.
Inqanaba lokuvelisa apho "iNgonyama King" yadutyulwa isenokubonakala ingaqhelekanga, ngezixhobo ezingaqhelekanga zizalisa umgangatho ophambili kunye neqela leengcali emva kweekhompyuter ezijikeleze umjikelezo, kodwa la yayingamathambo enkqubo. Ukuqala ukudubula, uMlawuli uJon Favreau kunye nomchwephesha weCinematologist uCaleb Deschanel banxiba izixhobo zentloko ezazibabeka kwihlabathi eliqinisekileyo leMufasa neSimba.
Endaweni yokunyanzela abenzi beefilimu ukuba baziqhelanise nezixhobo zedijithali, iLegato ilungiswe ngokomzimba ifilimu izixhobo zokusebenza ngaphakathi kwehlabathi elibonakalayo. Icandelo le-crane laguqulwa ngezixhobo zokulandelela ukuvumela iikhompyuter ukuba ziphinde zisebenze ngqo kwikhompyuter. Nokuba kungene i-Steadicam, ivumela u-Deschanel ukuba ahambise ikhamera enezixhobo ezifanayo njenge-action isenzo sokudubula. Injongo yayikukuvumela imveliso ukuba idale ngendlela yendabuko, kusetyenziswa izixhobo ezisemgangathweni ezazingekho nje kwinqanaba kodwa kwikhompyuter. “Kwimveli yangaphambili ungayihambisa ikhamera ngokupheleleyo ngaphakathi kwikhompyuter,” utshilo uLamato. Kodwa kwindalo yethu ebonakalayo, sibeka phantsi umkhondo we-dolly kwinqanaba, kwaye imelwe ngokuchanekileyo kwiseti yedijithali.
Blackmagic Design yayingeyonxalenye yenkqubo, kodwa ingumgogodla kwinkqubo, ukubonelela ngezibonelelo zehlabathi elibonakalayo kunye ne studio ngokubanzi. "Sisebenzise iimveliso zeBlackmagic kuqala njengendlela yevidiyo yesakhiwo sonke, utshilo umvelisi wemiphumela ebonakalayo uMat Rubin," kuwo onke amanqanaba okuphatha ividiyo, ekuthabatheni imifanekiso edutyulwe liqela kusetyenziswa amakhadi e-DeckLink, kusetyenziswa iMic Studio Studio Camera 4Ks , Abaguquli bemigangatho yeTeranex kunye nezitshintshi ezahlukeneyo zevidiyo ze-ATEM ezinje nge studio yeemveliso ze-ATEM Production 4K kunye ne Studio yeTV yeTV HD. "
Iziphumo zokuhlela kunye nokubonwayo zazinxibelelaniswe kunye ngokusebenzisa ii-Smart Videohubs routers ukuvumela zombini amasebe ukufikelela kwigumbi lokuhlola, kunye nokwenza njengemithombo kwigumbi lokuhlola. Ngexesha lokuveliswa okubonakalayo, njengoko iikhompyuter zivelisa imeko ebonakalayo, ukubanjwa kweDekhLink kunye namakhadi okudlala kwakhona kubambe i-footage kwaye kudlalwa ngothungelwano lwevidiyo, ukondla kwisikhululo solawulo kunye nokurekhodwa kwiHyperDeck Studio Minis.
Nje emva kokuba kudutyulwe i-footage kwaye kwabanjwa kwiikhompyuter, ukuseta kwaguqukela kwinkampani ebonakalayo ye-MPC ukuyila imifanekiso. Kuyo yonke inkqubo yokujonga kwakhona i-footage kunye nokugcina uhlaziyo oluhlaziyiweyo, uLegato kunye neqela lakhe basebenzise iDaVinci Resolve Studio kunye neDaVinci Resolve Advanced Panels kwiindawo ezimbini, kunye noLegato efaka umbala kwi-shots njengezikhokelo kubabambisi bokugqibela. Iprojekthi ye-DaVinci Resolve yayihlala ihlaziywa amaxesha amaninzi ngosuku nge-footage entsha evela kwi-MPC. ILegato ihlolwe ku-Favreau kuphela kwimixholo yokusikwa, endaweni yokubonisa iseshini nganye, ngoko ke kubalulekile ukuba sikwazi ukulungelelanisa ii-shots ukubonelela ngamava agudileyo wovavanyo. Isibonelelo sabelane ngedatha yokuSombulula i-DaVinci ukuvumela amaqela ahlukeneyo ejikeleze iziko ukujonga umda wexesha elifanayo ngaphandle kokubopha igumbi lovavanyo.
Ngaphandle kwendlela yokusika esetyenziselwa ukudubula ifilimu, imveliso yokugqibela ibonisa uhlobo lobugcisa lwenene ifilimu, ngokubonelela ngezixhobo zokwenyani ze-cinematography kunye nokuhambahamba kokudala kuyo yonke. “Indawo ebonakalayo idale umhlaba oguqukayo ngokwenene ukuba ungene,” utshilo uLerato. Ukusuka ekubeni uCaleb akwazi ukuhambisa ilanga ukuze lifezekise ixesha elifanelekileyo losuku, okanye umlawuli wezobugcisa akwazi ukubeka izihlahla okanye ukuseka iziqwenga ngexesha lokuvelisa, ilizwe elibonakalayo lasivumela iqonga elimangalisayo lokudubula imuvi. Ngokuqinisekileyo yayiluhlobo olutsha lwayo ifilimu, Inako konke ukufunyanwa kwemigangatho yemveliso esemgangathweni, kodwa ngakumbi ke ukuze sikwazi ukuyila. ”
Iifoto zemveliso yeDaVinci Resolve Studio, DaVinci Resolve Panel Advanced, Micro Studio Camera 4K, Studio Studio Production 4K, Smart Videohub, Teranex Express, HyperDeck Studio Mini kunye nazo zonke ezinye Blackmagic Design iimveliso ziyafumaneka www.blackmagicdesign.com/media/images.
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie I-Studio ye-ATEM Production 4K I-ATEM Television Studio HD Blackmagic Design Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo CES2017 ukuhlela UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli MStar mveliso SJGolden - SoftAtHome Iintetho kunye nemisrya IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago BuTeknoloji TVU Networks Injini yeVidiyo	2019-09-24
Previous: Ngenisa i-Vancouver yamkela i-Colourist uJimmy Hsu
next: IMicrosoft ijika iigiya zemfazwe kunye neLectrosonics